Fandefasana - SUYI IMPORT AND EXPORT CO., LTD
Fanaterana entana avy any Sina
Fanaterana entana avy any Chine mankany Rosia, Kazakhstan, Ukraine, Belarus
Mandray fitaterana karazana karazany any amin'ny firenena CIS izahay. Na aiza na aiza misy anao dia mifandraisa aminay! HANDEVA avy hatrany ny entam-barotra avy any Shina
vidiny 15 $ / kg
vidiny hatramin'ny 8 $ / kg
Fanaterana ny rivotra
vidin'ny famandrihana ampahany
avy amin'ny 1,5 $ / kg
fitoerana iray na ampahany iray manontolo
vidiny manomboka amin'ny $ 1 ka hatramin'ny
Express avy any Shina mankany Russia
Ny fandefasana entana avy any Shina ao anatin'ny 1-3 andro no fomba haingana indrindra ahazoana entana avy any Shina. Ny fandefasana rivotra dia ampiasaina hitaterana santionany, entana lafo vidy ary matetika ho an'ireo kozatra amin'ny fitaovana samihafa.
Ary koa, ity karazana fitaterana ity dia mety amin'ny fivarotana an-tserasera izay manana mari-pahaizana avo lenta amin'ny entana ary tsy mila manangana trano fanatobiana entana any Russia izy ireo. Ao anatin'ny 1-3 andro dia azo atao ny mandray ny entana any Moskoa ary mandefa azy ireo avy hatrany amin'ny alàlan'ny fandefasana iraka any amin'ny mpanjifa manerana an'i Russia. Tsy ilaina mihitsy ny manatrika manokana an'i Maosko raha te handray ny entana, satria hamindra avy hatrany ny kaomandy izahay amin'ny fandefasana iraka ary manondro ny mpividy ny entanao. Ny fandefasana Express ao anatin'ny 1 andro no fandefasana haingana indrindra avy any Shina mankany Moskoa
Ny fanaterana dia tanterahina any Moskoa, avy eo mandefa ny entana amin'ny alàlan'ny orinasam-pitaterana any Rosia izahay na mampiasa serivisy mpampita hafatra, arakaraka ny ora andefasana azy.
Ny vidin'ny fandefasana entana avy any Shina mankany Rosia dia manomboka amin'ny $ 10 isaky ny 1kg. Rehefa manisa ny vidin'ny fandefasana azy dia boribory hatramin'ny kilaometatra iray manontolo ny lanjan'ny entana. Ny orinasanay dia mandefa entana misy lanjany.
Mampalahelo fa tsy ny entana rehetra no azo entina amin'ny alàlan'ny fandefasana mivantana avy any Shina. Ny bateria, ny mpanangona - dia ferana ho an'ny kalesy, ary koa ny fitaovana misy bateria mahery. Ny ankanavaka dia ny batery kely amin'ny fitaovana, ny fandefasana entana toy izany dia tsy maintsy ifanarahana mialoha (ohatra, ny fandraisam-peo, fakan-tsary, takelaka ary telefaona). Fady koa ny fitondrana biby, zavamaniry ary entana hafa voarara amin'ny fitaterana an'habakabaka. Misy fetra amin'ny haben'ny entana - ho an'ny fifampidinihana, mifandraisa amin'ny orinasanay ary holazainay aminao amin'ny antsipiriany momba ny fandefasana an-tsoratra sy kajy ny vidiny.
Ho an'ny entana lehibe sy lehibe dia azonao atao ny mampiasa ny fandefasana rivotra haingana avy any Chine na fandefasana entana
Ny fandefasana entana mavesatra avy any Shina dia sarotra amin'ny hetsika mifandraika,
izay misy ireto fiasa manaraka ireto
entana ao amin'ny trano fanatobiana entana
Fandoavana aorian'ny fandefasana
Maka amin'ny trano fanatobiana entana
any Moskoa, fanaterana
any amin'ny faritra rehetra any Russia
Fanaterana ny rivotra avy any Sina mankany Rosia
Ilaina ny fandefasana rivotra avy any Sina amin'ny fitaterana entana haingana any Russia.
Mandefa entana avy any Moskoa izahay amin'ny andro fahatongavana amin'ny alàlan'ny orinasam-pitaterana Rosiana. Azonao atao ny mahita ny vidin'ny fandefasana amin'ny alàlan'ny fandefasana fangatahana aminay.
Ny entan-drivotra avy any Shina dia mety amin'ny entana kely maika, fanaterana ny fitsarana na famenoana haingana ny trano fanatobiana entana. Ny fandefasana toy izany dia ampiasaina amin'ny entana tena marefo sy lafo koa.
Tena mety ny mampiasa Fandefasana rivotra rehefa ilaina maika ny ampahan'ny entana. Ho an'ny mpanjifa maro, ny fandefasana toy izany dia manampy amin'ny famenoana haingana ireo tahiry tsy misy ao amin'ny trano fitehirizana, fa ampahany kely amin'ny entana amin'ny alàlan'ny fitaterana an'habakabaka ihany no ampitainy, ho an'ny ankamaroan'izy ireo dia efa mampiasa ny fandefasana entana avy any Shina na fitaterana an-dalamby - noho izany dia misy tahiry lehibe azo amin'ny fandefasana
Rehefa tonga ny entana ao amin'ny trano fivarotanay, noho ny fangatahan'ny mpanjifa, dia azontsika atao ny mizara ny entana amin'ny faritra maro ary mandefa azy amin'ny karazana fandefasana mifanaraka amin'ny fanirian'ny mpanjifa.
ary amin'ny lalamby
ho an'ny fitaterana
avy amin'ny mpamatsy ihany koa
manatitra ny entana
mankany amin'ny trano fanatobiana entana any Shina
ary fitehirizana ao anaty trano fitahirizana
rehefa nahazo ny entana
Fanaterana entana avy any Chine mankany Rosia
Ny fandefasana kargo avy any Shina no fomba fahita mahazatra indrindra sy voaporofo amin'ny fandefasana entana avy any Shina mankany Russia. Ny tombony amin'ny fitaterana kargo dia ny fomba tsotra sy haingana handefasana entana. Rehefa entina avy any Shina ny entana, dia voadio amin'ny alàlan'ny drafitra notsorina ny entana, izay manala ireo olana marobe amin'ny antontan-taratasy.
Amin'ny ankapobeny, ny fanaterana entana dia ampiasain'ny mpandraharaha izay mitondra entana ho azy ireo na hamidy indray. Matetika io fomba fitaterana io dia ampiasain'ny orinasa lehibe, satria tsy mila kaontenera feno entana foana izy ireo. Raha mila fampahalalana misimisy kokoa momba ny fiasa amin'ny entana entana avy any Shina mankany Russia, mila mifandray amin'ny orinasanay ianao. Hilaza aminao izahay ny nuances amin'ny fandoavam-bola amin'ny mpamatsy sinoa sy ny fividianana entana any Shina ho an'ny fikambanana ara-dalàna sy olon-tokana, ny pitsopitsony amin'ny fanomanana antontan-taratasy famaranana ho an'ny entana, hanome toro-hevitra momba ny famokarana mari-pankasitrahana sy fanambarana ny fanajana izahay.
Azontsika atao ihany koa ny manolotra ny fandefasana avy any Shina miaraka amin'ny fahazoan-dàlana feno (fanaterana ofisialy ny entany avy any Shina) - fandefasana kaontenera na fanaterana entana vita amin'ny vondrona avy any Sina.
Fanaterana entana avy any Sina amin'ny alàlan'ny fitaterana an-dalamby
Ny fandefasana avy any Sina amin'ny alàlan'ny lalamby dia iray amin'ireo karazana fitaterana entana malaza indrindra. Betsaka ny safidy amin'ny làlan-kaleha sy ny toerana fanadiovana ny entana.
Noho izany, azo atao ny misafidy làlana mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa tsirairay, izay hanomezana fahafaham-po ny teny sy ny vidin'ny fandefasana.
Ny fandefasana kaonteneran'ny kaontenera amin'ny alàlan'ny lalamby avy any Shina no fomba mahomby indrindra hitaterana ny entana avy any Shina mankany Rosia. Ny fotoana fandefasana, raha jerena ny fahazoan-dàlana amin'ny fadin-tseranana, dia 30 ka hatramin'ny 40 andro. Ny fanadinana ny fadin-tseranana dia azo tanterahina any Kazakhstan na any amin'ny Repoblikan'i Belarus, hikajiana ny safidy tsara indrindra ho anao izahay amin'ny resaka vidiny sy fotoana. Mba hikajiana ny vidiny, mandefasa fampiharana. Ity karazana fandefasana entana avy any Shina ity dia miorina amin'ny fotoana - izay midika hoe karazana fitaterana voaporofo sy azo antoka.
Fa indrindra indrindra, ny fitaterana ny lalamby mpitondra entana avy any Chine amin'ny alàlan'i Belarus dia takiana. Rehefa avy nandalo ny fadin-tseranana tao Minsk, ny entana dia alefa any amin'ny trano fivarotan'ny mpanjifa any Russia.
Ny entana ho an'ny vondrona dia azo alefa amin'ny lalamby ihany koa. Azo atao na ny enta-mavesatra entana amin'ny enta-mavesatra na ny enta-mavesatra miaraka amin'ny fahazoan-dàlana feno.
Tafiditra ao anaty RATE
Fiarovana ny entana amin'ny fahavoazana. Hamboarinay ao anaty boaty misy sosona telo sosona ny entana avy amin'ny boatin'ny mpamatsy anay. Hamafisinay miaraka amin'ireo zoro mihamafy ny boaty. Horaisinao amin'ny entana azo amidy ny entana.
Fiantohana entana. Hiantoka ny entanao izahay. Manana ny volan'ny fiantoham-ponay izahay avy eo izay handoavanay onitra raha sendra toe-javatra tsy ampoizina. Tsy maka risika ianao raha miara-miasa aminay.
Fanamafisana ny entana ao Mosko sy amin'ny ladoany. Nikajiana mialoha ny vidin'ny fandefasana izahay ary nampiditra azy ireo tamin'ny tarif. Ohatrinona ny vidin'ny raikitra amin'ny fifanarahana - ho tsara vintana isika amin'izany.